Ihe E Mere Mgbe Ọtụtụ Ndị Batawara n’Ọgbakọ na Dọminikan Ripọblik | Akwụkwọ Mgbaafọ nke 2015
Jehova Chọrọ “Ka A Zọpụta Ụdị Mmadụ Niile”
Ọ bụ uche Jehova “ka a zọpụta ụdị mmadụ niile, ka ha nwetakwa ezi ihe ọmụma nke eziokwu.” (1 Tim. 2:4) N’ihi ya, Ndịàmà Jehova nọ na Dọminikan Ripọblik na-agbasi mbọ ike izi mmadụ niile nọ n’obodo ha ozi ọma, ma ndị nọ n’ụlọ mkpọrọ.
N’afọ 1997, ndị ọsụ ụzọ pụrụ iche abụọ na-aga n’ụlọ mkpọrọ a na-akpọ Najayọ, nke dị na San Kristobal, akụziri ụfọdụ ndị mkpọrọ Baịbụl kwa izu. Ọ bụ ebe ahụ ka ha hụrụ otu nwa agbọghọ dị afọ iri abụọ na atọ aha ya bụ Gloria. Ọ bụ onye Kolombia. E jidere ya tụọ ya mkpọrọ n’ihi na ọ na-ere ọgwụ ọjọọ. E nwere otu nwanna nwaanyị ya na ya nọ n’ụlọ mkpọrọ. O nweghị ihe o mere e ji tụọ ya mkpọrọ. Ụmụnna anyị wetaara Gloria akwụkwọ Reasoning From the Scriptures na akwụkwọ anyị ndị ọzọ ka o nwee ike mata azịza ajụjụ ndị ọ na-ajụ. Otú ịmụ ihe si atọ ya ụtọ mere ka ndị mkpọrọ ndị ọzọ chọọkwa ịmụ ihe. Nke a mere ka mmadụ ole ụmụnna anyị na-abịa amụrụ Baịbụl kwa izu na-ehikwu nne.
Ihe Gloria na-amụta na Baịbụl mere ka ọ kpawazie àgwà ọma. N’ihi ya, n’afọ 1999, ọ ghọrọ onye nkwusa a na-emebeghị baptizim. Ọ na-eji ihe karịrị awa iri asaa ezi ndị mkpọrọ ibe ya ozi ọma kwa ọnwa. Ọ na-amụkwara mmadụ isii Baịbụl. N’afọ 2000, o degaara onyeisi ala akwụkwọ, rịọ ya ka ọ gbaghara ya. Ọ gbaghaara ya ma kpọpụta ya n’ụlọ mkpọrọ n’ihi na ọ gbanweela. Mgbe ọ pụtara, a kpọlara ya Kolombia. N’afọ 2001, e mere ya baptizim n’agbanyeghị na ndị ezinụlọ ya achọghị ka ọ bụrụ Onyeàmà Jehova.
Onye a bụ Gloria Cardona na di ya. Ọ mụtara eziokwu mgbe ọ nọ n’ụlọ mkpọrọ. Ya na di ya bụ ndị ọsụ ụzọ ugbu a
Mgbe e mechara Gloria baptizim, ọ ghọrọ onye ọsụ ụzọ oge niile. O mechara lụọ otu okenye ọgbakọ. Ha abụọ bụ ndị ọsụ ụzọ oge niile. Ha na-eje ozi ugbu a n’ebe a chọkwuru ndị nkwusa na Kolombia. Gloria amụọrọla ọtụtụ ndị Baịbụl, ha enyefee Jehova onwe ha, e meekwa ha baptizim. O kwuru na obi dị ya ụtọ maka otú Jehova si nyere ya aka, ya abata n’ọgbakọ. O kwukwara na otú kacha mma ọ ga-esi kelee Jehova bụ inyere ndị ọzọ aka ka ha bata n’ọgbakọ, otú ahụ Jehova nyeere ya.
Akụkọ Gloria gosiri na mkpọrọ a tụrụ mmadụ agaghị emeli ka onye ahụ ghara ịmụta banyere Jehova. Ụfọdụ ụmụnna si alaka ụlọ ọrụ gara hụ ndị isi ụlọ mkpọrọ rịọ ha ka ha kwe ka ụmụnna anyị na-aga n’ụlọ mkpọrọ ndị ọzọ amụrụ ndị mkpọrọ Baịbụl. Ha kwere ka ụmụnna nwoke dị iri anọ na atọ na ụmụnna nwaanyị isii na-aga n’ụlọ mkpọrọ iri na atọ akụziri ndị mkpọrọ Baịbụl.
“Mee Ka Ụdọ Ụlọikwuu Gị Dị Ogologo”
N’ihe dị ka afọ 1999, ndị nkwusa e nwere na Dọminikan Ripọblik dị puku iri abụọ na otu, narị isii na iri asatọ na anọ. E nwekwara narị ọgbakọ atọ na iri anọ na abụọ. Ndị nkwusa ndị ahụ na-amụkwara mmadụ dị puku iri atọ na anọ, narị atọ na iri asatọ, Baịbụl. Ndị bịara maka Ncheta Ọnwụ Jizọs dịkwa iri puku asaa na puku abụọ, narị isii na iri asaa na itoolu. N’ihi otú a ọtụtụ ndị si na-abata n’ọgbakọ, ụmụnna anyị egbughị oge mee ihe Aịzaya kwuru na Baịbụl. Ọ sịrị: “Mee ka ụlọikwuu gị sakwuo mbara. Ka e setịa ákwà ụlọikwuu nke ebe obibi gị dị ebube. Akparala ya ókè. Mee ka ụdọ ụlọikwuu gị dị ogologo, meekwa ka mkpọ́ ụlọikwuu gị sie ike.”—Aịza. 54:2.
Otu nsogbu ụmụnna anyị nwere bụ ịchọta ebe ha ga-arụ Ụlọ Mgbakọ ga-aba ọtụtụ ndị nkwusa. N’afọ 1996, a rụchara Ụlọ Mgbakọ dị n’akụkụ alaka ụlọ ọrụ dị na Santo Domingo. Ọ bụ ebe ahụ ka ọgbakọ ndị dị n’isi obodo Dọminikan Ripọblik na obodo ndị ọzọ dị ya nso na-anọ enwe mgbakọ. Ma, Ụlọ Mgbakọ nke dị na Vila Gọnzalez adịkwaghị mma. E kwesịrị ịrụzi ya ma ọ bụkwanụ rụọ nke ọhụrụ. Ọ bụ ebe a ka ọgbakọ ndị ọzọ na-aga mgbakọ.
N’afọ 2001, Òtù Na-achị Isi kwuru ka a rụọ Ụlọ Mgbakọ n’ala anyị dị na Vila Gọnzalez. Ụlọ Mgbakọ a ga-aba puku mmadụ abụọ na narị ise. Obi tọrọ ụmụnna anyị ezigbo ụtọ mgbe a gwara ha na a ga-arụkwa ebe a ga na-anọ enwe Ụlọ Akwụkwọ Ọzụzụ Ndị Ozi, nke a na-akpọzi Ụlọ Akwụkwọ Maka Ndị Na-ekwusa Ozi Ọma Alaeze. A ga-arụ ebe a ga na-anọ enwe ụlọ akwụkwọ a n’akụkụ Ụlọ Mgbakọ. Ọ ga-enwe ụlọ obibi, klas, ọ́bá akwụkwọ, usekwu, na ebe a ga-anọ na-eri ihe. E nyefere Jehova ụlọ ahụ n’afọ 2004. Ọ bụ Theodore Jaracz, onye so n’Òtù Na-achị Isi, kwuru okwu e ji nyefee ya Jehova. Kemgbe e nyefechara ya Jehova, a nọrọla na ya nwee klas iri na ise.
mailto:?body=Ihe E Mere Mgbe Ọtụtụ Ndị Batawara n’Ọgbakọ%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D302015019%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Ihe E Mere Mgbe Ọtụtụ Ndị Batawara n’Ọgbakọ